Ikhabhathi yelog entle kwindawo entle yendalo! - I-Airbnb
Ikhabhathi yelog entle kwindawo entle yendalo!
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguTor
Le ndlu entle yelog ibekwe kufutshane neperile yonxweme yaseNorway; idolophu ebizwa ngokuba yiRåkvåg kwidolophu yaseTrøndelag - eyodwa kumqolo wayo omhle webrewery endala (eyayisetyenziselwa ishishini lokuloba ekuqaleni kweminyaka yoo-1900), kwaye yaziwa ngayo yomibini imiboniso yobugcisa, iivenkile zakudala, iminyhadala yasehlotyeni, iindawo zokuhlala ezizodwa kunye neekhefi ezimangalisayo / zokutyela.
Le khabhathi igqwesileyo kuzo zombini iintsapho ezinkulu nezincinci, uhambo kunye nabafana, uhambo lokuloba, iqela labahlobo, uhambo lwentombi, iqela lomsebenzi, njl.
Le ndlu ibekwe kumgama oziikhilomitha ezi-2 ngaphandle kwelali iRåkvåg kumasipala we-Indre Fosen, malunga. 4-5 imizuzu ngemoto ngaphandle kumbindi Råkvåg, kunye yokupaka iimoto eziliqela ngaphandle ndlwana kwaye kufutshane.
Le cottage inamagumbi okulala ama-4 ewonke, enye yawo isisihlomelo esingaphezulu kwendlwana. Ngaphakathi kwi-cottage kukho iibhedi ezi-7, kunye neebhedi ezi-3 kwisihlomelo ngaphandle.
Ngaphakathi kwi-cottage kukho indawo enkulu enkulu enegumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo, indawo yokungena eyahlukileyo kunye negumbi lokuhlambela elahlukileyo elinendlu yangasese eyongezelelweyo.
Indawo yangaphandle ejikeleze i-cottage ineendawo ezininzi ezintle zangaphandle ezinendawo eninzi ye-terrace, ukongeza nendawo eyahlukileyo / i-gapahuk efanelekileyo yokugcoba! Jonga imifanekiso.
Ikhabhathi iyinxalenye yendawo yekhabhinethi / indawo yokuhlala kwifjord entle yaseNordfjord, kodwa isakhuselwe. Kukho nendawo yokuhlambela nje ngeemitha ezili-100 ukusuka kwi-cottage, bona iifoto!
Ukubanakho kokufika ngephenyane ukuya eRåkvåg. Naluphi na olunye uthutho ukusuka apho ukuya kwikhabhini lungalungiselelwa.
Ukuqeshwa kwesikhephe, izixhobo zokuloba, izixhobo zomntwana (ibhedi / isitulo) njl.
Ukucoca emva kokuhlala kufakwe kwixabiso.
Kumaxesha onyaka aphezulu, sinokuba luncedo ekuboneleleni ngeentlobo ezahlukeneyo zeziganeko kunye namava enkcubeko yokutya yaseNorway eqhelekileyo, yendawo kunye nezingqongileyo ukuba ufuna ukufumana okuninzi kuhambo apha!
I-Råkvåg yilali endala yokuloba iiyure eziyi-1.5 ngemoto ngaphandle kweTrondheim, kwaye idweliswe njengenye yeedolophu ezigcinwe kakuhle eNorway!
Esona sizathu siphambili sokhenketho olukhulu kunye nobomi obunyakazelayo behlotyeni apha kungenxa yokuba iRåkvåg inezona zindlu zindala zepier (ezisetyenziselwa ishishini lokuloba) ngaphandle kwezixeko zaseNorway, ezazikhe zanewonga lelinye lawona mazwe aseNorway ahamba phambili ekulobeni iherring (Stjørnfjorden). )! Ngokusekelwe koku, "Råkvåg Anno 1930", esona siganeko sikhulu sonyaka, sihlelwa minyaka le kwimpelaveki yokugqibela kaJulayi. Ubomi obuphithizelayo basehlotyeni eRåkvåg bubonelela ngomhlaba ochumileyo weendawo zokutyela ezininzi kunye neendawo zokuhlala zabakhenkethi kunye nabatyeleli.
Apha uya kufumana kwakhona "i-Bryggeutstillinga" - i-Fosen peninsula yentengiso enkulu kunye nomboniso wobugcisa obonisa ngaphezu kwama-80 ababonisi bezobugcisa kunye neendwendwe ezijikelezayo ze-5000 ngexesha lehlobo.
Ungafumana ngakumbi malunga neRåkvåg, iFosen kunye nommandla oyingqongileyo, iminyhadala, iindlela zokuhamba intaba, ikhefi, iindawo zokutyela kunye nobomi basebusuku ngokuqhagamshelana nabasayiniweyo ngezantsi, iividiyo ezimangalisayo zeRåkvåg kuyoutube, nakweminye imidiya yoluntu!
Le ndlu yeplanga intle kwaye eqhelekileyo yaseNorway ibekwe ngaphandle nje kweperile yaseNorway, ilali yakudala yaseFinshermans egama linguRåkvåg kwiNqila yaseTrøndelag, yodwa kwizindlu zayo ezintle zepier zakudala (ezazisetyenziselwa ishishini lokuloba ekuqaleni kweminyaka yoo-1900), kwaye yaziwa kakhulu ngayo yomibini imiboniso yobugcisa. , izinto zakudala eziphawulweyo, kunye nekhefi ethandekayo / iindawo zokutyela.
Le khabhinethi yokuphuma ilungile kuzo zombini iintsapho ezinkulu nezincinci, uhambo kunye nabafana, uhambo lokuloba, iqela labahlobo, izithandwa, amaqela omsebenzi, njl.!
Sinokuba luncedo ngokunikezela ngeentlobo ezahlukeneyo zeziganeko okanye amalungiselelo, kunye namava enkcubeko yokutya yaseNorway eqhelekileyo, yendawo kunye nezingqongileyo ukuba ufuna ukwenza uninzi lohambo apha!
Ikhabhinethi imi kumgama oziikhilomitha ezi-2 ngaphandle kwelali yase-Råkvåg kumasipala wase-Indre Fosen, malunga. 4-5 imizuzu ngemoto ngaphandle kumbindi Råkvåg, kunye nendawo yokupaka iimoto eziliqela ngaphandle ndlwana.
Le ndlwana inamagumbi okulala ama-4 ewonke, ibiyenye yawo isihlomelo ngaphandle kwendlwana. Ngaphakathi kwikhabhini kukho i-7 (iibhedi), kunye ne-3 (iibhedi) kwisihlomelo ngaphandle.
Ikwanendawo enkulu enkulu enegumbi lokuhlala, indawo yokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo, indawo yokungena eyahlukileyo, kunye negumbi lokuhlambela elahlukileyo elinendlu yangasese eyongezelelweyo.
Ngaphandle kwekhabhinethi iqulethe iindawo ezininzi zokuqokelela, kukho iindawo ezoyikisayo kunye neendawo zangaphandle ezijikeleze i-cottage! Jonga imifanekiso.
Ikhabhinethi iyinxalenye yendawo yokuhlala / indawo yokuhlala kwiFjord entle yaseNordfjord, kodwa isahlolwa kakuhle ukuze ubumfihlo bakho kunye nonxibelelwano olunoxolo nendalo luhlale.
Ukuba uyafuna, kukho indawo yokuhlambela nje ngeemitha ezili-100 ukusuka kwikhabhinethi, bona imifanekiso!
Ukubanakho kokufika ngephenyane ukuya eRåkvåg.
Naluphi na olunye uthutho ukusuka apho ukuya kwikhabhini lungalungiselelwa.
Ukurenta isikhephe, izixhobo zokuloba, izixhobo zomntwana (ibhedi / isitulo), njl.
Ukuhlamba emva kokuhlala kwakho kubandakanyiwe kwixabiso.
I-Råkvåg yilali yabalobi yakudala eneeyure eziyi-1,5 ngaphandle kweTrondheim, kwaye idweliswe njengenye yeelali ezigcinwe kakuhle kulo lonke elaseNorway.
Esona sizathu siphambili sokhenketho olukhulu kunye nobomi behlobo obunyakazelayo apha kungenxa yokuba iRåkvåg inezona zindlu zindala zepier (ezisetyenziselwa ishishini lokuloba eNorway) ngaphandle kwezixeko zaseNorway, ezazikade zinewonga njengenye yeefjords zokuloba iherring eNorway (Stjørnfjorden). )! Kwesi siseko, "Råkvåg Anno 1930", esona siganeko sikhulu sonyaka, sibanjwa minyaka le kwimpelaveki yokugqibela kaJulayi. Ubomi basehlotyeni obuchwayitisayo eRåkvåg bubonelela ngendawo yokuzalela yeendawo zokutyela ezininzi kunye nendawo yokuhlalisa iindwendwe.
Apha uya kufumana kwakhona "i-Bryggeutstillinga" - intengiso enkulu ye-Fosen kunye nomboniso wobugcisa obonisa ngaphezu kwama-80 ababonisi bobugcisa kunye neendwendwe ezijikelezayo ze-5000 ngexesha lehlobo.
Ungafumana ngakumbi malunga neRåkvåg, iFosen kunye nengingqi eyingqongileyo, iminyhadala, iindlela zokuhamba intaba, ikhefi, indawo zokutyela kunye nobomi basebusuku ngokuqhagamshelana nomtyikityi, kunye neevidiyo ezithandekayo zeRåkvåg kuyoutube!
Umbuki zindwendwe ngu- Tor
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Indre Fosen